Bernie Sanders anogona kuendesa pamutemo mbanje nemukuru wemauto Zuva reKutanga here?
Bernie Anogona Kuzvinyoresa Zviri Pamutemo Zuva Rokutanga?
Pamutemo Cannabis Na Executive Order
Ko Bernie Sanders Achanyoresa mbanje pamutemo zuva rekutanga here? Teerera iyo paPodCast kana Tarisa iyo YouTube pa Bernie Sanders Pamutemo Marijuana na Executive Order paZuva rekutanga. Tsvaga kana anogona kunyatso kuzviita - chero akakunda VaDonald Trump musarudzo dza2020 - uyezve kuti anorova maDemocrat ose zvakapetwa sezvaakangoita mukuvhiringidza kwaIowa komichi.
Zvakawanda Nezve Executive Orders.
Zvinoenderana nePosvo: Dispensary Ruzivo - Dzvanya Pano.
"Bernie Sanders anoti anoda kumisa iyo 1% iyo isingade zvemutemo we cannabis uye ipa iyo 98% inoita. Uye hapana mabhirionari anokwanisa kumumisa kuti arege zviri pamutemo mbanje nemukuru wemauto - asi bumbiro rinogona here?
Mhoroi, ndiri Tom uye munogona kundiwana nekuenda kugweta gweta we cannabis gweta uye kudzvanya pamusoro kune wangu webhusaiti cannabis indasitiri yemutemo.com - dura rekudzidza zvakawanda nezveindasitiri iyi - inotisvitsa kuna - Can Bernie Sanders angangozivisa cannabis zviri pamutemo nemukuru chiito?
Gwaro 2 reBumbiro rinobvumidza matanho akakwirira ekumanikidza mutemo. VaDonald Trump vanofunga kuti Chinyorwa 2 chinomutendera kuti aite chero chaanoda - uye kutongwa kwenyonganiso muSeneti kunooneka kuchisimbisa izvozvo. Chii chinotaurwa 2 chinonyatso taura - kwete zvakawanda: iye unochenjerera kuti mitemo ichengetwe nokutendeka. Chinyorwa 2 Chikamu 3.
Ndeipi yakakurumbira kongiresi yekutonga? 1863's Emancipation Proclamation - izvo zvinoreva kuti Abe Lincoln anofanirwa kunge akafunga nezveuranda sekusabvumirana - kunyangwe ichigadziriswa chi13 chisiri kuitika kusvika muna 1865.
Havana kutanga kudaidzwa kuti Executive Orders kusvika muna 1907. Muna 1952 - Mutungamiri Truman akaisa zvigayo zvesimbi pasi pemubatanidzwa - saka bernie sanders vanogona kuita chimwe chinhu nenzira isiri yezvematongerwo enyika uye yekuisa pamutemo cannabis nemutungamiriri wedanho?
Ndeupi muganho weMutungamiri Executive Order Powers?
Kuita kwa Trumans kwaive kure zvakanyanya - kwaive kuyedza kuita mutemo panzvimbo pekujekesa chiitiko ichi. Dare Rakadzora Zvinhu zvinopa mhosva Gweta Guru kuti riitise zvinhu kuburikidza nehurongwa hwekuita basa - izvo zvinoreva kuti bazi rinogadzirisa rinogona kuchinja hurongwa - asi vanokwanisa kupfura nzira iyi?
Ko kana Bernie achitenda zvandanga ndichitaura nguva dzese uye kuti kurambidzwa kwembanje imutemo usinawo wekusarurana wakasarudzika unotadza kuyedza nekurumwa kwebumbiro remutemo? Chaachaita chiitiko here chekumirira bumbiro pamusoro peiyo sarudzo yekuita yakaitwa neCongress muna 1970?
Ko kana izvo zvikaenda kure - zvakanaka, Congress inogona kuita mari yekudzora yake yepamusoro kurongeka - asi nekubvisa cannabis kuCSA - tsime, izvo hazvibhadhare iwe chero zvekumanikidza. Saka ivo vanofanirwa kumhan'ara. Zvichida mudunhu chairo - saIdaho kana Indiana angamhan'ara US. Izvo zvaizotora nguva kushanda.
Saka kana Bernie achitenda kuti kuronga ikozvino Marijuana haisi pamutemo uye kusarudzana kurudzi mukumanikidza uye kwaanobva emutemo anotsigira kutenda kwake - chokwadi anogona kuzviita.
Asi anogona kumira kupfupi nezve izvo uye otungamira manejimendi ake kuti asangomisikidza iyo federal mari mbanje nekuti dambudziko guru rinotungamirwa rinotarisana kana vatungamiriri vanoshandisa simba ravo nekuita mitemo pasina mvumo yemusangano nekubva kure nemabasa aripo.
Nei Bernie Sanders Aigona Pamutemo Marijuana Na Executive Order
Kuti ndizvo zvazviri - anogona kungozviita zvakadaro - asi zvinogona kunge zvisiri kushanda mushure mekupokana zviri pamutemo.
Zvichida kuumbwa kweakuru wedare kunogona kuita basa - semuenzaniso kuudza hurongwa hwake kuti husasimbise mitemo yemari mbanje panzvimbo yekuita shanduko yemutemo uye kuibvisa kuCSA.
Chaizvoizvo zvaizove kupokana - Sezvakaitika muna 1940 takatora maAmerican maAmerican ndokuvaisa mumisasa.
Or patakapinda Eisenhower zvikoro zveveruzhinji. Iwo mairairo akange aine nharo panguva iyoyo - asi asina kupikiswa.
Cannabis kunyoreswa pamutemo kwakakurumbira - yakakurumbira zvekuti ini ndinokubheja iwe unofarira izvo uye kunyorera kune cannabis Legalization nhau. Chitatu ne2:00 pm.
Saka ipapo iwe unayo - Bernie anogona kunyora zvachose kongiresi yekutonga
Usandipe mhosva - yaive mhosva yeInternet.
Bernie Anovimbisa Kuenda Pamutemo Marijuana PaZuva Rekutanga- Anogona Kuzviita?
Manheru eIowa Caucuses, Senator Bernie Sander (I-VT) akapikira kunyoresa mbanje pamutemo makumi mashanu ese munyika pazuva rake rekutanga muhofisi, "kuburikidza nemakurukota." VaSanders vakavimbisawo kutsikisa zvinyorwa zvevanhu vakasungwa kuti vabatwe, pamwe nekufuridzirwa nedanho rakafanana kubva kuna Gavhuna Pritzker weIllinois.
Kufanana nezvipikirwa zvese zvemushandirapamwe, pane zvimwe zvipingamupinyi zvepamutemo uye zvinoshanda. Mutemo Unodzora Zvinhu, uyo unorambidza mbanje pamubatanidzwa. Pave paine kwenguva refu yekukundikana kwayedza kudzokorora cannabis pasi peCSA. Iyo CSA zvakare allowed Gweta Gurukota rekuti resechisheni cannabis kuburikidza nehurongwa hwekuita basa, nekudaro ichipfuura Congress. Nekudaro, iyo Rulemaking maitiro ndehurefu uye bureaucratic, uye zvirokwazvo kwete chimwe chinhu maSanders kana chero munhu anogona kuwana kuburikidza neZuva Rekutanga. Nevermind, chokwadika, kuti Sanders zvimwe haazove neGweta rake rakasimbisa rimwe Zuva.
Pane imwezve mukana. Muna 2013, Mutevedzeri weGweta General James Cole, vanoshanda muOrgan Administration, vakaisa chinyorwa che "Kutungamira Nezve Marijuana Enforlement", inowanzozivikanwa seye Cole gwaro. Cole Memo vanonyanya kuisa mutemo kuDhipatimendi reJustice yekudzora mutemo weCSA mumatunhu ayo anga aisa pamutemo mbanje. Muna 2018, ipapo-Gweta Gurukota rezvemukati menyika, VaJeff Session, vakadzora Cole Memo, ndokusiya mutemo weCSA uchifunga nezvevasungwa vemubatanidzwa. Gweta Guru 'Semo' raive peji rimwe chete akareba, izvo zvinoratidza kuti zviri nyore sei federal federal inogona kuchinja.
Tinokwanisawo kuwana zvimwe zvinonzwisisika kubva kune imwe nzvimbo yemutemo, iyo yekubva kunze kwenyika. The Obama Administration yakatanga maviri akasiyana maitiro evatorwa, DAPA (Defended Action yeVabereki veAmerica) uye DACA (Defended Action yeVana Kusvika). DAPA neDACA zvakavakirwa pane pfungwa ye Prosecutorial Kunzwisisa, kana zano rekuti vatevedzi vemitemo vane njere yekusarudza nguva yekumisikidza mutemo uchibva pane zvinotariswa zvakaita seyakaomeserwa zviwanikwa uye hukuru hwekuputsa mutemo. Vachitaura zvakazara, DAPA neDACA zvirongwa umo hurumende inoramba kuteedzera mimwe mitemo yekushanya inopesana nemapoka akaenzana evanhu.
DAPA yakapikiswa munzira yese kuenda kuDare Repamusorosoro muna kesi ya 2015 Texas v. United States, uko chikamu che4-4 cheDare chakasiya chirongwa munzvimbo. Dare Repamusoro soro nguva pfupi yadarika rakanzwirira DACA mukati Dhipatimendi reHomeland Security v. Regents yeYunivhesiti yeCalifornia, nechisarudzo chakatarisirwa naJune 2020. Kunyange iyi iri nyaya yekubva kune dzimwe nyika, inogona kutiudza zvakawanda pamusoro pekuti hurumende yemubatanidzwa, kana mune iyi President President Sanders, inogona kuramba kuti isimbise chikamu chemitemo yemubatanidzwa.
Uye zvakadii nezvechirongwa chaBernie chekuregerera huwandu hukuru hwevanhu vanobatwa nemhosva yekuba mbanje? Icho chinoratidzika semubvunzo wakanangana-mberi. Simba rekuregerera reMutungamiriri rakafukidzwa muChinyorwa II, Chikamu chechipiri, Chikamu chekutanga cheBumbiro reMutemo reUS. Izvi zvinopa kuti "[iye] Mutungamiri ... achava nesimba rekupa Repruse and Ruregerero pamusoro peMhosva pamusoro peUnited States, kunze kwekunge nyaya dzekupomerwa." Kunyange simba reMutungamiriri rinoregerera rinogumira pamisangano yemubatanidzwa (uye nokudaro haringashande kuzvirevo zvembanje), zvinogamuchirwa kuti hapana mimwe miganho ine simba pamusoro pekuregerera kweMutungamiriri.
Ehezve, izvi zvese zvinogona kuve zvekufungidzira zvachose - hatizive kana kuchave neMutungamiri Bernie, kana kunyange Democraticeminee Bernie. Asi sechinhu chinoshanda uye chepamutemo? Chiremera chinoita kunge chichireva izvo Hongu Anogona!